Ugari neInvestment yeGeorgia neGolden Visa
Isu tinopa Ehupfumi Kuenda Kunoshanda Sevhisi muGeorgia ye:
● Kugara nekudyara kuGeorgia
● Ugari nekudyara kubva kuGeorgia
● Visa yegoridhe muGeorgia
● Pasipoti yechipiri kubva kuGeorgia
● Ugari nekudyara kweGeorgia nekudyara muzvivakwa
Best Vamiririri veHurumende neInvestment kuGeorgia uye Magweta e Citizenship by Investment in Georgia and brokers for real estate Zvizvarwa zvemuGeorgia zvinoshanda zvakabatana kuchengetedza kwevatengi.
Citizenship neInvestment vamiririri veGeorgia vanopa mabasa ekugara nekudyara kuGeorgia, Citizenship nezvirongwa zvekudyara muGeorgia, Citizenship nehurongwa hwekudyara kuGeorgia, wechipiri Ugari nekudyara kuGeorgia, hunyanzvi hwehukama nekudyara kuGeorgia, ugari hwehugari nekugara nekudyara kuGeorgia. , Citizenship yekusingaperi nekudyara kuGeorgia, Citizenship kwenguva pfupi nekudyara kuGeorgia, Citizenship nehurongwa hwekudyara kuGeorgia, Citizenship nehurongwa hwekudyara kuGeorgia, Residency nekudyara kuGeorgia, Residency nezvirongwa zvekudyara kuGeorgia, Residency nehurongwa hwekudyara kuGeorgia, wechipiri Kugara nekudyara kuGeorgia, hunyanzvi hwekugara nekudyara kuGeorgia, pekugara nehugari hwekugara nekudyara kuGeorgia, ugari uye ugari nekudyara kuGeorgia, hupfumi Residency zvirongwa muGeorgia, Residency nehurongwa hwekudyara kuGeorgia, Residency nezvirongwa zvekudyara kuGeorgia, kechipiri. pasipoti muGeorgia, wechipiri pas zvirongwa zvemitambo muGeorgia, chirongwa chechipiri chepasipoti kuGeorgia, pasipoti yechipiri kuGeorgia, pekugara uye pasipoti yechipiri kuGeorgia, repasipoti repasipoti repashure muGeorgia, pasipoti yepiri nekudyara kuGeorgia, yechipiri ugari pasipoti kuGeorgia, yechipiri pasipoti chirongwa kuGeorgia, chechipiri zvirongwa zvepasipoti muGeorgia, vhiza yegoridhe kuGeorgia, mavhiza egoridhe kuGeorgia, zvirongwa zvendarama zveGeorgia, chirongwa chendarama vhiza kuGeorgia, vhiza yegoridhe vhiza muGeorgia, yechipiri vhiza vhiza chirongwa muGeorgia, vhiza mbiri yegoridhe vhiza muGeorgia, ugari uye vhiza yegoridhe kuGeorgia, kugara uye vhiza yegoridhe kuGeorgia, mugari wevisa vhiza muGeorgia, chirongwa chendarama vhiza kuGeorgia, zvirongwa zvegoridhe zvevisa kuGeorgia.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Citizenship nekudyara kuGeorgia nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muGeorgia ye Citizenship nekudyara: USD 125,000 (yakaenzana 300,000 GEL)
Nhanganyaya Georgia uye Citizenship neInvestment
Dzidza zvakawanda nezve Georgia
Kuwanda kwenzanga dzemumaguta nemataundi anonakidza, munda unonakidza unobatanidza makomo nemakomo ejecha jena, kuwedzera kune mweya wakadzikama unopa yega yega yemwaka mina inoita Georgia ive imwe yenzvimbo dzakanakisa dzekugara muSouth. Pamusoro penyika, iwe uchaona yekumusoro-notch kusiyanisa, hunyanzvi uye mitambo yekuvaraidza, uye makofi anopa chikafu kubva kutenderera pasirese.
Nei uchigara munyika yeGeorgia?
Kuwana vhiza yeGeorgia
Nhanho yekutanga yekutenda kugara kuGeorgia nyika ndeyekuwana vhiza, iyo yakave nyore kuve nemazuva ano.
Nekuda kwemitemo ichangoburwa yeGeorgia munaGunyana 2014, zvakashanduka kuve nyore kuwana vhiza yeindasitiri yekufamba mumazuva mashoma nematanho ekutanga munyika yako kune chero dhipatimendi reGeorgia kana dhipatimendi rekufambisa, kana iwe unogona kunyorera iro nzira dzewebhu.
Iyo inokurumidza, yakavimbika, uye yakachengeteka zano rekutora online vhiza kune avo vanofamba zvakanyanya, chero chikonzero. Uri wega, kana uine mhuri, kana shamwari, zvisinei nekuti ndezve bhizinesi here kana zvakasiyana kurapwa.
Assortment yekugara muGeorgia nyika
Nezve kufambisa pfungwa, pfungwa, zvirongwa, sekutonga, isu tinotarisira nyika dzakasarudzika nzira dzehupenyu, semuenzaniso, nyika yakanyarara, kana yakapfuma nzira yazvino yehupenyu, kana hupenyu husina kunyoroveswa.
Asi, ita shuwa kuti Georgia ine zvese. Kusangana kunoshamisa kuri kubata kuti kuferefetwe.
Kune akawanda masitayera ekugara muGeorgia nyika, chimwezve chinhu kuburitsa kushingairira kwako kugara muGeorgia nyika.
Tbilisi, guta rinodiwa kwazvo muGeorgia
Tbilisi ndiro guta guru reGeorgia, guta rakakurumbira, rakapihwa muenzaniso wakanaka wechiGeorgia nenhoroondo dzekare dzemasvomhu dzekuEurope dzakasangana nemhando yemunda. , mudiwa wezororo uye nzvimbo yavo yekutanga pavanoshanya kuGeorgia.
Iri iguta rinoshamisa rine maonero akazara anonyungudutsa moyo, ine migwagwa yakaganhurwa, nzvimbo dzakasvibira, nyanza, mabani akasvibira, nemavharanda, semuenzaniso, yeGeorgian National Museum, ine madhipatimendi ayo uye hwema hwekare hweGeorgia nhoroondo. kuburitsa pfupi kuenda kune yakapfuura, uyezve, nzira yakanaka yekuziva nezvenhoroondo yekumashure yeGeorgia.
Mushure meiyi kukurumidza kukanganisa kwekare, kune iyo chaiyo Narikala Fortress, yakashanda nemaPersia neTurk emirs, tichifunga kumashure kune 4Th century. Kugara muGeorgia kunogumbuka, unogona kunakidzwa nemanzwiro ako uye mweya wako paChreli Abano inova inodziya yakasimba inodziya MuTbilisi inocherechedzwa neShurufura mvura, muchiitiko chekuti iwe urikuda kuva neimwe sauna yepasirese, kubhuka pawebhu pamberi penguva inokurudzirwa.
Tbilisi iguta rakakura rinoshanda, riine sarudzo hombe uye rakavhurika mikova yevagari vayo vese, vanoona, uye network yevatorwa.
Vagari veGeorgia vangangoita mamirioni mashanu, ichokwadi chaizvo, zvisinei nemigwagwa yayo yakaonda, haina kumbobatikana semadhorobha makuru, semuenzaniso, Detroit kana Los Angeles.
Nyika yeGeorgia pane yako radar yekushandisa
Zvisinei, ndicho chinhu chikuru kuziva kuti "Kugara munyika yeGeorgia kune musoro kune vese here?"
Zvese zvinhu zvinofungidzirwa, uku "1,000,000 yemadhora kubvunza", pamwe kugara munyika yeGeorgia hakusi kuderera kana kudhura zvakare.
Zvinoenderana nekuti unorarama sei uye une shungu dzakadii nezve nzvimbo dzinoshamisa dzeGeorgia dzinotangira kubva kumisika yekare yemuminda nezvitoro zvidiki kusvika kune dzinodhura dzimba dzevaenzi nematayera ayo anoshamisira.
Iko mari yeGeorgia ndiyo yeGeorgian lari.
chinhu chinobatsira nezveGeorgian Lari ndechekuti inosvika pa0.35 USD. Nhau dzinosimudzira dzevashanyi vanoshandisa mari shoma, vanoenda kuzororo, uye zviripachena kune vanhu vemuno nevagari zvakare. Kudya uye zvinwiwa zvinonzwisisika uye zvinonaka panguva imwe chete.
Kunyangwe hazvo kana iri pamukana wekuti chiri chikafu chemumugwagwa kana pazvinhu zvekudyira zvakanyanyisa. Zvakare, nyika inn uye pekugara zvisingashamisike zvine mwero uye zvakakodzera mugove weshumba. Georgia haina mubhadharo wakaderera unobvumidzwa nemitemo yemitemo. Kubva pane izvo, iwo wakajairwa mwedzi kusvika pamwedzi mubhadharo unoongororwa pa500 US Madhora. Ichi ndicho chimwe chiratidzo chekuti kugara munyika yeGeorgia kune musoro kune vanhu vaviri veko nevashanyi.
Georgia munguva yakareba
Panguva iyo patinotaura mari, zvingangoita, inobata ziso rezvemari, zvakadii nezvekuti titarise padyo nemamiriro emari eGeorgia.
Pamusoro pazvose, vazhinji vevanhu vemuGeorgia maGeorgian 85% uye vashoma veArmenians, Azerbaijanis nevamwe.
Isu tinofanirwa kudzoserera wachi kuti tifambe zvakanaka pane tsika dzechiGeorgia dzakasiyana dzatinogona kuona kuti nyika ino yakasangana nenzanga dzakawanda kubva kuEurope yekare kusvika kunguva yeSoviet.
nzvimbo yayo inofadza, akasiyana mhepo, uye nharaunda yayo paGungwa rakasviba nemugwagwa wesirika yakatakura Georgia kuenda kubhizimusi rewaini nemabasa akasiyana siyana, semuenzaniso, kuchera zvicherwa mugoridhe, sirivheri, mhangura, uye simbi mumakomo eCaucasus.
Mushure menguva yeSoviet, hurumende dzeGeorgia dzakaedza kutora kusvetuka kwakakura kwekutenderedza chimiro chayo chemari kuenda kuhupfumi husina kudzivirirwa iyo inotaura kune musuwo wakakura kwazvo wevanoziva zvemari kuti vaite bhizinesi rakadzikama mune inonzwisisika yezvemamiriro ekunze zvichitevera kwenguva yakati. yemakakatanwa maGeorgia akange ambosangana nawo mukati menguva yakareba, kunyanya munguva yeSoviet.
Wedzera kune izvozvi, indasitiri yekufamba uye mabhizimusi ekurima ari kubudirira semhedzisiro yemhando dzakasiyana dzemuchadenga, jogirafi, uye, zviripachena, assortment yenguva dzechokwadi nemadzinza.
Rudzi runoshamisa kwazvo rine hwaro hunoshamisa uye machechi asingakanganwiki, mabasilica, masvingo ekare, makungwa, nemahombekombe uye mamvura ekuchera zvicherwa zvakaita kuti hupfumi hweGeorgia huende zvakanyanya na2008 nhamba yevaenzi yakanga yapfuura anopfuura mamirioni mana nekuwedzera nhanho nhanho.
Indasitiri yepasi muGeorgia kufamba
Tinogona kutaura kuti kuisa mari mukati medu ndeimwe nzira yekuunza mari nekuda kwemubhadharo wayo wakaderera, asi zvine chekuita nekurendesa mukamuri mega kana iwe uri mushandi kana asina kujaira kudzidza, semuenzaniso, zvinogona kukubhadharira madhora mazana maviri mwedzi uyo unodhura kuGeorgia asi panguva imwechete isingadhuri kupfuura mamwe marudzi eEurope.
Kuputira zvinhu, kugara muGeorgia nyika iri kuenda kune yakanaka, yakapusa, uye yakasimba pazviyero zvese.
dzakasiyana nzanga dzinogara dzichizadza matsva kubva mupurasitiki matsva maitiro muchitaira, chikafu, kutsausa kwerudzi rupi zvarwo Zvingave zvakadaro, chikafu muGeorgia chinozivikanwa nemagariro eruzhinji rweGeorgia.
Gungano reruzhinji nderokugadzira "supra" rudzi rwekuputika unobatanidza mhuri yega yega kuti idye nekukurukura nezvezuva ravo, zviripachena, waini yekuGeorgia inosanganisirwa kusimudzira tsika yechivanhu yekugara munyika yeGeorgia uye yakanamatira kumabvazuva echiKristu chiGeorgia. bata.
Zvekutanga zvinyorwa zveCitizenship neInvestment yeGeorgia
Chishoma kudyara kwe Citizenship nekudyara kuGeorgia
USD 125,000 (yakaenzana 300,000 GEL)
Citizenship nekudyara kuGeorgia
Mvumo yekugara mari
Kuchengetedza nguva yeU Citizenship nekudyara kweGeorgia
Pakarepo pasi pechirongwa ichi
Mushure mekugara kwemakore mashanu
Ugari Hwenyika Hwakabvumidzwa kuvagari veGeorgia
Investment Sarudzo dze Citizenship nekudyara kweGeorgia
Investment yebhizimusi rekunze zvakananga muchikamu cheGeorgia mune idzi ndima Energy Kugadzira Kugamuchira / Mahotera & Resorts / Real estate Logistics Services
Nei uchienda kuCitizenship nekudyara kweGeorgia
Georgia iri kudivi rekumabvazuva kweGungwa Dema, zvinoreva kuti iri pamuganhu weEurope neAsia chaipo. Iyi inzvimbo yakanaka yebhizinesi kana kutamisirwa mamiriro ekunze akapfava uye kusimudzira hupfumi,., Kubva munaKurume 2017 vagari vayo vanogona kuenda kuSchengen nyika vasina vhiza, izvo zvinoita kuti vagari vemuGeorgia kune avo vanonyorera nyore Schengen visa, chirongwa ichi zvisingaite mutengo-unoshanda, unowanikwa pamwe chete, kamwe-kamwe-mupiro wemhuri yese.
Mhuri inopinda muGeorgia
Chikumbiro chako chinogona kusanganisira nhengo dzepedyo dzemhuri yako, zvichireva kuti wawakaroorana naye uye vese vana vako vaunotarisira vari pasi pemakore makumi maviri nematanhatu.
Citizenship Nehurongwa hwekudyara muGeorgia
Mukati megadziriro yechirongwa chekuva mugari wemuGeorgia, unogona kuve mugari weGeorgia, kana iwe ukaita mupiro wakakosha kuhofisi yenyika. Iyi inguva-imwe, isingadzokeri mari inoshandiswa inosimudza ugari
Maitiro ekunyorera akakurumidza, sezvo kuwana chizvarwa cheGeorgia kuchingova mwedzi chete kubva pakapihwa mupiro uye chikumbiro. Ugari hwenyika mbiri haurambidzwe.
Mari yemubhadharo ndeye 125,000 euros, kunyangwe uri kunyorera nhengo yemhuri.
Mari inodiwa yeGeorgia
Kuti ukwanise kuve mugari wemuGeorgia, unofanirwa kupa 125,000 maEuro (zvisinei kuti ndega kana pamwe chete nemhuri yako). Mushure mekupedza iyo rubatsiro, iwe unogona kunyorera kuImigration Hofisi uine humbowo hwekuchinjisa.
Mutengi kutsigira Citizenship nekudyara kweGeorgia
Chikwata chedu che Citizenship neInvestment Agents eGeorgia uye Citizenship ne Investment Lawyers yeGeorgia inopa vatengi uye mhuri dzavo muGeorgia nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuGeorgia, kugara nekudyara kubva kuGeorgia uye nemimwe mikana yekudyara yekufambisa, munyika makumi matatu nenomwe.
Mabasa edu haangogumiri pakugara nekudyara kubva kuGeorgia kana Golden Visa kubva kuGeorgia kana ugari nekudyara kubva kuGeorgia kana yechipiri pasipoti, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara mikana kubva kuGeorgia, ichipa mhinduro izere kana iwe uchida kutanga kambani mu Georgia kana kumahombekombe, zviwanikwa zvevanhu muGeorgia uye zvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari nezvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuGeorgia uye sekondari pekugara.
Rutsigiro Rwakakosha kune Vagari veGeorgia:
Isu tinopa zvinodhura Citizenship nekudyara mabasa yeGeorgia, kuburikidza nezvatinokwanisa mari yekudyara uye yekufambisa mutemo zveGeorgia, inokwanisika inivhesitimendi mari yekuenda kune dzimwe nyika kukumbira kuGeorgia, Kudhura kweUgari nekudyara kwekudyara kweGeorgia, inokwanisika Citizenship nemagweta ekudyara eGeorgia uye inokwanisika yekufambisa yekufembera yakasimba kuGeorgia
Ugari nekudyara kubva kuGeorgia kuenda ku37 Nyika.
Ndarama vhiza kuGeorgia kuenda ku37 Nyika.
Yechipiri pasipoti kubva kuGeorgia kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Kubva kune dzimwe nyika kubva kuGeorgia kuenda ku106 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuGeorgia.
Goridhe visa zvirongwa muGeorgia kuenda ku37 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuGeorgia kuenda ku37 Nyika.
Chechipiri pasipoti zvirongwa kubva kuGeorgia kuenda ku37 Nyika.
Mapurogiramu ebhizinesi ekupinda munyika kubva kuGeorgia kuenda ku106 Nyika.
Citizenship neInvestment yeGeorgia kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvekudyara zvivakwa muGeorgia nemaonero ekuti mutengi anofanira kuwana kudzoka kwakanaka mukudyara kuGeorgia, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwavakaita kwavo kweCitizenship nekudyara kweGeorgia. Isu tinosungirirwa nevashoma vashoma vezvivakwa zvevatengesi kuGeorgia vane rekodhi rekodhi uye yavo zvivakwa zviri munzvimbo dzakanaka muGeorgia, vachitora zvakanaka kudzoka.
Yakanakisa real estate dzimba dzekugara zvirongwa zveGeorgia nemari yekudyara muzvivakwa muGeorgia.
Unoda kuziva - Georgia Citizenship neInvestment
Ugari neInvestment Gweta reGeorgia rinopa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Citizenship nekudyara kuGeorgia. Yedu standard masevhisi e Citizenship neInvestment kuGeorgia inosanganisira:
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda kuti utamire kubva kuGeorgia kana kuenda kuGeorgia, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Citizenship nekudyara kweGeorgia kune vatengi kuti vawane Citizenship yeGeorgia uye kudzikisa njodzi yekuramba.
Zvichienderana neyakafanira kushingairira mushumo weGeorgia, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira zvirinani.
Kuti isu tifambire mberi nehukama hwako nekudyara kunyorera kweGeorgia isu taizoda makopi akaongororwa evatengi uye nhengo dzemhuri pasipoti.
Dudziro uye apostile emagwaro Ugari nekudyara kunyorera kweGeorgia. Magweta edu akasarudzika e Citizenship nekudyara kweGeorgia uye vhiza yegoridhe inobatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zveCitizenship nekudyara kunyorera kweGeorgia zvagadzirira, tichazvizadza nezviremera zvakakodzera zveGeorgia.
Kana chikumbiro chako cheU Citizenship nekudyara kweGeorgia changobvumidzwa, tinogovana nhau dzakanaka newe uye totanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Hatitsigire kana kupa Citizenship neinvestment services kuGeorgia kune pazasi vanotaurwa Vanhu kana mabhizinesi eGeorgia:
Citizenship nebasa rekudyara kuGeorgia hadzisi kupihwa kune Vatengesi kana vanogovera zvombo uye mabara kubva kana kuGeorgia.
Citizenship nemapurogiramu ekudyara kweGeorgia hazvipi kupihwa kweTechnical surveillance kuGeorgia kana maindasitiri espionage ezvirongwa zvekudyara mukati kana kubva kana kuenda kuGeorgia.
Citizenship nekutsvaga kwekudyara kuGeorgia hazvipi kupihwa chero zvisiri pamutemo kana tsotsi zviitiko muGeorgia.
Citizenship nerutsigiro rwekudyara yeGeorgia haisi yevanhu vanobata maGenetic zvinhu muGeorgia.
Citizenship nebasa rekudyara kuGeorgia haisi yemabhizimusi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine ngozi zvebhagiriya kana zvombo zvenyukireya muGeorgia.
Citizenship nechirongwa chekudyara rutsigiro rweGeorgia haruwanikwe kune vanhu veGeorgia vanoita mukutengesa, kuchengetedza kuGeorgia, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Citizenship nekudyara yeGeorgia haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Citizenship zvirongwa zvebasa yeGeorgia haisi yezvitendero uye masangano avo muGeorgia.
Citizenship nebasa rekudyara mu Georgia haina kupihwa kune vanhu vanobata mune Zvinonyadzisira muGeorgia.
Ugari Hwedu magweta muGeorgia haitsigire bhizinesi rekutengesera mumidziyo yezvinodhaka muGeorgia.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veGeorgia neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekurambwa chero kupi zvako kubva kuzviremera zveGeorgia kubvumidzwa kunyorera Citizenship nekudyara muGeorgia.
Ugari nekudyara muGeorgia nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa Citizenship yakanakisa nerutsigiro rwekudyara kuGeorgia kwekudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa muGeorgia.
Inotsigirwa nehukama hwepasi rose neyakavanzika ruzivo uye zvinodiwa nemutemo zveGeorgia, tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Hedu Citizenship nekudyara masevhisi eGeorgia inopa yakachipa mitengo, ine yakanakisa inogona kubudirira chiyero cheGeorgia.
Isu takatora makore echiitiko kune hunyanzvi hwehukama kuGeorgia uchitsigira vatengi uye mhuri dzavo kuGeorgia.
Ruzivo rweUgari nekudyara kwekukumbira kweGeorgia nevamiriri vezvemutemo kuGeorgia vachipa rutsigiro kune vatengi.
Tine akanakisa magweta nevamiriri veGeorgia kubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Usati uri Citizenship yeGeorgia uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yepamusoro yechikwata yaizovapo yebhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuGeorgia
Isu tine ruzivo rwepasi rose mu Citizenship nekudyara kusanganisira Georgia, kubatsira vatengi kubva kumativi ese epasi nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Citizenship yako nekudyara kuGeorgia ikakundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu neshanu dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weCitizenship neInvestment kuGeorgia
Kuti uverenge mutengo weCitizenship nekudyara kweGeorgia ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi kuGeorgia, isu tinokwanisa kupa masevhisi ari nani nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchasanganisira, kunosanganisira, mutengo weCitizheni nehurongwa hwekudyara kweGeorgia uye zvimwe zvikwereti.
mhando vhiza yeGeorgia
Maitiro Ekubvumirwa kweGeorgia
Kwekugara kwenguva pfupi muGeorgia
Permanent Residence muGeorgia
Embassies uye ma Consulates eGeorgia
Ugari neInvestment muGeorgia uye Mamwe maSevhisi
Isu takanyora pasi mamwe mashoma masevhisi atinopa kuGeorgia nekuda kwekukurumidza kana kweramangwana zvinodiwa.
Kana iwe uri kuronga kutamira nemhuri yako kuenda kuGeorgia nekudyara mari, isu semumwe wako weGeorgia, tiripo kuti tipe zvakawanda zveimwe sevhisi uye uye nguva yaungade kuGeorgia nemitengo inodhura.
Kunze kweCitizenship nekutsvaga kwekudyara kuGeorgia, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare kuGeorgia, ayo iwe ausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nevamwe vapi vamazano eGeorgia vachitigadzira shopu imwechete yekumira yeGeorgia nenyika 106.
"Takaisa makore ekuyedza uye pasi rose muZuva 106 kubatsira mhuri, vanhu, uye bhizimusi reGeorgia mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira nzira yemutengi wedu kupfuura Citizenship nekudyara kweGeorgia nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga muGeorgia nepasi rese.
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani muGeorgia kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani kuGeorgia yakachipa nesu.)
Akaundi yeBhangi muGeorgia
Chero ani investor anotamira kuGeorgia angangoda account yako yebhangi kuGeorgia uye account yebhangi yekambani muGeorgia, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Sipo yekubhadhara kuGeorgia
Incase iwe unoda kubvunza muGeorgia, ye mhinduro dzemadhijitari kuGeorgia senge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi muGeorgia kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meCitizenship nekudyara ku Georgia kana uchironga tanga bhizinesi nekutenga riripo bhizinesi muGeorgia kutanga pakarepo muGeorgia.
HR Services muGeorgia
Our kambani yevashandi muGeorgia inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare post nzvimbo munzvimbo yeGeorgia vakasununguka.
Nhamba Dzenhare dzeGeorgia
Bhizinesi foni nhare dzeGeorgia pamwe ne nhamba chaiyo yeGeorgia Nyika 102 uye Maguta 291.
Mari Yekuronga Services muGeorgia
Accounting, kushingairira kwakakodzera muGeorgia uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero kuGeorgia
Setup bhizinesi muGeorgia
Mushure meCitizenship nekudyara kuGeorgia, setup bhizinesi mu Georgia.
Isu tinopa pazasi zvakataurwa mhinduro dzeIT muGeorgia
Webhu Kugadzira muGeorgia
Ecommerce Kuvandudza muGeorgia
Webhu kuvandudza muGeorgia
Kubudirira kweBlockchain muGeorgia
App Kubudirira muGeorgia
Software Kubudirira muGeorgia
Magweta e Citizenship neInvestment kuGeorgia
Isu tinopa Citizenship yepamutemo neInvestment mhinduro yeGeorgia uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuGeorgia, isu tiri vatungamiriri, gweta redu reGeorgia rine vamiririri vekupinda zvakanaka muGeorgia, isu tine mukurumbira wekuburitsa yakanakisa vatengi sevhisi yeGeorgia kujekesa sarudzo dzekudyara mhinduro kune vanhu veGeorgia nemhuri dzavo. Hwedu Hugari nevekudyara timu yeGeorgia inopa zvakagadziriswa mhinduro dzekubudirira kweMutengi.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mudzimai, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara kuGeorgia, pamvumo yako yekugara muGeorgia inogamuchirwa.
Simba regweta reGeorgia rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako neHurumende nevemagweta ekudyara kuGeorgia Kana iwe uri kuGeorgia kana uronga kushanyira Georgia, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadhare yakawedzera yekuwana Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kuGeorgia uri kure, simba rako regweta rinofanirwa kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe munharaunda yeGeorgia. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakatendeka kana kubvumidzwa nemumiriri weGeorgia.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Ugari neInvestment kuGeorgia
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara muGeorgia?
Kugara nekudyara kuGeorgia, kunogona kutsanangurwa sekuwana kugara kweGeorgia kuburikidza nekudyara muhupfumi hweGeorgia kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera kuti ugare nekudyara kuGeorgia, ugare nehurongwa hwekudyara kuGeorgia. inotsigirwa nekugara nenzvimbo dzekudyara kuGeorgia, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara kuGeorgia, kugara kwakanyanya nemagweta ekudyara kuGeorgia uye kugara kwakanakisa nevarairidzi vezvekudyara kuGeorgia, vachishanda zvakanyanya kugarwa nevamiririri vezvekudyara kuGeorgia, uye nemafemu akanakisa ekuona nezvekupinda munyika. muGeorgia.
Kugara patsva nemabasa ekudyara kweGeorgia | Kugara nevamiriri vezvekudyara muGeorgia | Kugara patsva nemagweta eInvestment kuGeorgia | Kugara nemagweta ekudyara muGeorgia | Kugara nevezvekudyara varidzi kuGeorgia
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara muGeorgia?
Ugari nekudyara kuGeorgia, kunogona kutsanangurwa sekuwana ugari hweGeorgia kuburikidza nekudyara muhupfumi hweGeorgia kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe kuGeorgia. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuGeorgia, ugari nehurongwa hwekudyara hweGeorgia hunotsigirwa nehugari hwemo nevekudyara mabasa eGeorgia, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisisa nemagweta ekudyara kuGeorgia, ugari hwakanakisa nemagweta ezvekudyara kuGeorgia uye kuva mugari wekunakisisa nevarairidzi vezvekudyara kuGeorgia. kuva mugari wakanakisa nevamiririri vezvekudyara muGeorgia, uye makambani akanakisa ekuona nezvekupinda munyika.
Affordable Investor yekufambisa mabasa eGeorgia | Affordable immigration solicitors kuGeorgia | Vanodhura varidzi vemari vanoenda kune dzimwe nyika muGeorgia | Vanodhura varidzi vekupinda munyika magweta kuGeorgia | Vanodhura vatyairi vekune dzimwe nyika vanachipangamazano kuGeorgia | Affordable immigration law firms kuGeorgia
Ndeipi tsanangudzo yepasipoti yechipiri muGeorgia?
Yechipiri pasipoti muGeorgia, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari wepamutemo weGeorgia kuburikidza nekudyara muhupfumi hweGeorgia kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvivakwa, bhizinesi, zvisungo zvehurumende, zvichingodaro. wechipiri pasipoti masevhisi eGeorgia, kuburikidza nemagweta edu epiri epasipoti eGeorgia, magweta echipiri epasipoti kuGeorgia uye akanakisa echipiri mapasipoti mazano eGeorgia, vachishanda kumahofisi echipiri epasipoti eGeorgia, uye mafemu ekuona nezvekupinda munyika muGeorgia.
Chechipiri pasipoti masevhisi eGeorgia | Chechipiri pasipoti vamiririri muGeorgia | Yechipiri mapasipoti magweta muGeorgia | Yechipiri mapasipoti magweta muGeorgia | Chechipiri pasipoti vanopa mazano kuGeorgia
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa muGeorgia?
Ndarama vhiza kuGeorgia, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana pekugara mvumo yeGeorgia kuburikidza nekudyara muhupfumi hweGeorgia kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, hurumende zvisungo, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwe. Nyorera vhiza yegoridhe kuGeorgia, chirongwa chegoridhe vhiza cheGeorgia chakatsigirwa goridhe vhiza masevhisi eGeorgia, kuburikidza neyedu akanakisa egoridhe vhiza magweta kuGeorgia, akanakisa egoridhe vhiza magweta kuGeorgia uye akanakisa egoridhe vhiza varaidzi kuGeorgia, vachishanda pane akanakisa egoridhe vhiza vamiririri kuGeorgia, uye akanakisa ekupinda kwevanoona mafemu kuGeorgia.
Goridhe vhiza masevhisi eGeorgia | Ndarama vhiza vamiririri muGeorgia | Magoridhe vhiza magweta muGeorgia | Magoridhe vhiza magweta muGeorgia | Goridhe vhiza vanopa mazano kuGeorgia
Ndechipi chiri chidiki chekudyara kweCitizenship nekudyara kuGeorgia?
Kuderera kushoma kweCitizenship nekudyara kuGeorgia iUS $ 125,000 (yakaenzana ne300,000 GEL).
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuGeorgia rweCitizenship nekudyara?
Ehe, gweta redu muGeorgia nevamiriri veGeorgia vanopa rutsigiro rweCitizenship nekudyara kuGeorgia.
Ugari neInvestment kuGeorgia inodhura?
Mutengo weCitizenship neInvestment kuGeorgia uye Citizenship neinvestment fund zvinodiwa zveGeorgia ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete kubhadharisa fizi yeCitizenship neInvestment kuGeorgia, isu tinopawo yakawanda zvimwe zvinotsigira zveCitizenship neInvestment mhinduro.
Ndeipi vagari venyika vanogona kunyorera Citizenship nekudyara kuGeorgia kana investor visa kuGeorgia?
Ugari nevekudyara masevhisi eanogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeye Citizenship nekudyara kuGeorgia kubva kuAsia, Citizenship nekudyara kuGeorgia kubva kuAfrica, Citizenship nekudyara kuGeorgia kubva kuEurope, Citizenship nekudyara kuGeorgia kubva kuSouth America, Citizenship nekudyara kuGeorgia kubva kuMalaysia, Citizenship nekudyara kuGeorgia kubva Bangladesh, Citizenship nekudyara kuGeorgia kubva kuIndonesia, Citizenship nekudyara kuGeorgia kubva kuSri Lanka, Citizenship nekudyara kuGeorgia kubva kuNepal, Citizenship nekudyara kuGeorgia kubva kuIndia uye Citizenship nekudyara kuGeorgia kubva kuUAE.
Hugari hwehunyanzvi neInvestment Guidance yeGeorgia
Kumbira kubvunza Mahara kwehukama hwako neInvestment kuGeorgia
Mazwi akakosha mu Citizenship neInvestment yeGeorgia
Ministry of Culture uye Mitambo yeGeorgia
Dare reKubvisa Racial Discrimination (CERD)
Ministry of Ehupfumi uye Sustainable Development yeGeorgia
Ministry of Education uye sainzi yeGeorgia
Ministry of Yemukati Inodzingwa Vanhu vanobva kune Vakashambadzirwa Materu, pekugara uye Vapoteri veGeorgia
Ruzhinji Dziviriro yeVashandisi Kufarira
Dare reKubvisa Kusarura kwevakadzi (CEDAW)
State Security Service yeGeorgia
Ministry of Environment Dziviriro uye Zvekurima zveGeorgia
Constitutional Dare reGeorgia
Dare Guru reGeorgia
Komiti Yekodzero Dzevanhu (CCPR)
Ministry of Foreign Affairs yeGeorgia
Komiti Yokurwisa Kutambudzwa (CAT)
Komiti Yekodzero dzeMwana (CRC)
Yemutemo Rubatsiro Service
Ministry of Corrections uye Kuyedza kweGeorgia
Dare Repamusoro reJustice reGeorgia
Hofisi yeMunhu Dziviriro Dziviriro Muongorori weGeorgia
Ministry of Internal Affairs yeGeorgia
Ministry of Defense yeGeorgia
Sangano rekuchengetedza uye Kubatana muEurope
European Komiti Yezvemagariro
Komiti Yekodzero dzehupfumi, Zvemagariro uye Tsika (CESCR)
Tbilisi Dare redzimhosva
Ministry of Labour, Hutano uye Zvemagariro Nharaunda
Ministry of Regional Development uye Dziviriro zveGeorgia
Council of Europe Commissioner weHuman rights
Hofisi yeGurukota reHurumende Yekuyananisa uye Kuenzana Kwevanhu
Komiti yeKodzero dzeVanhu Vakaremara (CRPD)
Mahara Yemutemo Rubatsiro Portal
Ministry of Justice yeGeorgia
European Commission inopesana neRacism uye Intolerance (ECRI)
Muchuchisi Hofisi yeGeorgia
Komiti pamusoro peKudzivirirwa kweKodzero dzeVashandi Vese Vanotama uye Nhengo Dzemhuri Dzavo (CMW)
Dziviriro Yezvose yeGeorgia
European Komiti yekudzivirira Kwekurwadzisa uye Mukusarudzika kana Kusvibisa Kurapa kana Chirango (CPT)
YEMUNYAYA YEMUNYAYA YEMAHARA YEMAHARA
United Nations High Commissioner weHuman rights
Masangano ehurumende nemasangano asiri ehurumende anorwisa mhirizhonga
Link to Dhipatimendi Rekupinda muGeorgia , Nebasa mukuronga mitemo kuti kuwedzera Immigration kuGeorgia